ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ရော့ခ်သီချင်းသစ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဦးမဲ့ အဆိုတော် ဇော်ထွဋ်ရဲ့ “ကျောက်သားခြေရာ” တေးစီးရီး ထွက်တော့မည် | The Myanmar Independent News Journal
အနုပညာသတင်း တွေ့ဆုံ​မေးမြန်းခြင်း — ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆
“အနက်ရောင် ဒိုင်ယာရီ” အမည်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ရော့ခ်သီချင်းသစ်တွေ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဇော်ထွဋ်ဟာ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ တစ်ကိုယ်တော်ခွေကို “ကျောက်သားခြေရာ” လို့ အမည်ပေးထားပြီး လာမဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ထွက်ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုတော် ဇော်ထွဋ်ကို “ကျောက်သားခြေရာ” တေးစီးရီးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး MIJ က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာကို ဂီတချစ်သူတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
မေး ။ အနက်ရောင်ဒိုင်ယာရီ တေးစီးရီးထွက်ပြီး အခု ဒုတိယခွေကို ကျောက်သားခြေရာလို့ နာမည် ပေးထားတယ်လို့ သိထားပါတယ်၊ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ ဒီနာမည်ကို ရွေးဖြစ်တာလဲ?
ဖြေ ။ အခွေနာမည်အတွက် စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ အခွေထဲက သီချင်းတွေအားလုံးကို ခြုံငုံထင်ဟပ်စေမယ့် နာမည်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ရွေးခဲ့တာပါ။ ခေါင်းထဲကို ရောက်လာသမျှ နာမည်တွေ ချရေးလိုက်တာ အခု ၅၀ ကျော်ရှိတယ်။ အဲထဲကမှ အကြိုက်ဆုံးနဲ့ သီချင်းတွေအတွက် ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့် ကျောက်သားခြေရာ ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ရွေးဖြစ်တာပါ။ ဒီနာမည်က ကျနော့်အတွက်ရော သီချင်းတွေ အတွက်ရော အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုပါ။
မေး ။ ဒီတခွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေပဲလို့ သိထားပါတယ်၊ အရင်ကလိုပဲ သီချင်းတွေ အကုန်တယောက်တည်း ရေးထားတာလား? အခြားဘယ်သူတွေပါသေးလဲ?
ဖြေ ။ ဒီအခွေမှာတော့ ကျနော်အပြင် ကျနော့်သူငယ်ချင်း “သာယံ” နဲ့ တွဲရေးတဲ့ သီချင်း ၂ ပုဒ် ပါမယ်။ ဟိုးအရင်တည်းက ကျနော်နဲ့ တက္ကသိုလ်တည်းက သူငယ်ချင်း။ သူနဲ့ သီချင်းတွေလုပ်တာ ကြာလှပြီ။ အတော်များများ တွဲရေးဖြစ်တဲ့ အထဲကနေမှ အခု ၂ ပုဒ်ကို ထည့်သုံးဖို့ ရွေးဖြစ်ခဲ့တာ။ နှစ်ရှည်လများ လက်တွဲခဲ့တဲ့ ဂီတရူးဖော် ရူးဖက်တွေပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ကျနော် ခွေစလုပ်တည်းက ဒီနေ့အထိ ကျနော့်အပေါ် အကူအညီတွေ အများကြီးပေးခဲ့တဲ့ သူပါ။ နောက်ထပ် အခွေတွေမှာလည်း သူနဲ့ အတူတွဲရေးမယ့် သီချင်းတွေ ပါလာဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး ။ အခုခွေထဲမှာရော ဘယ်လိုသီချင်း အမျိုးအစားတွေ ပါဝင်ပါသလဲ? စုစုပေါင်း သီချင်း ဘယ်နှပုဒ်လောက် ပါမလဲ?
ဖြေ ။ တခွေလုံးမှာ သီချင်း ၁၁ ပုဒ်ပါမယ်။ ပုံစံတွေကတော့ ကျနော်တို့ မူလတည်ခဲ့တဲ့ ရော့ခ်လမ်းကြောင်း အတိုင်းပါပဲ။ မသွေဖီဘူး။ ဒါကလည်း ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲသွားဖို့ မရှိပါဘူး။
မေး ။ သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပရိသတ်မျိုး ရှိသလား? ဒါမှမဟုတ် ဂီတကြိုက်နှစ်သက်သူ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ထားတာလား?
ဖြေ ။ အဲလိုကြီး သီးသန့်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ရေးခဲ့ ဆိုခဲ့တာမျိူးတော့ မရှိဘူးဗျ။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုပြီး ခွဲခြားထားတာမျိူးလည်း မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မယ့်သူတွေ ကြိုက်ကြမှာပါ။ အများစုအတွက် နားဝင်တယ် အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်စရာပါ။
မေး ။ ပထမခွေ “အနက်ရောင်ဒိုင်ယာရီ” နဲ့ အခုဒုတိယခွေ “ကျောက်သားခြေရာ” ကြားမှာ ကွာခြားမှု ဘာတွေ ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာ ပရိသတ်ကို ပြောပြပေးလို့ရမလား?
ဖြေ ။ ကွာခြားမှု့ကတော့ သီချင်းတပုဒ်ချင်းစီအပေါ် ချဉ်းကပ်ပုံ ဖန်တီးပုံတွေ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ သီချင်းတွေအပေါ် ပိုပြီး ခံစားတတ်လာတယ်။ ပထမခွေက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေက အများကြီး။ အဲအပေါ် မူတည်ပြီး ဒီအခွေကို အကောင်းဆုံး ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ သီချင်းတွေ နားထောင်ကြည့်ရင်လည်း သိကြပါလိမ့်မယ်။ အရင်အခွေနဲ့ မကွာခြား မပြောင်းလဲတာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ တက်ကြွမှုနဲ့ ဆာလောင်မှုပါပဲ။
မေး ။ အခွေကို စတင်စီစဉ်ကတည်းက တယောက်တည်း လုပ်တာလား? စီစဉ်သူအပ်တာမျိုးရော ရှိလား?
ဖြေ ။ ဒီအခွေမှာ အစိတ်အပိုင်းတချို့ကို ကိုလားရှုပန်းက ကူညီ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီအခွေဖြစ်တည်မှုမှာ သူ့ရဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကလည်း အရေးပါ အရာရောက်ခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ အတီးသမားတွေကရော တဦးချင်းပဲ Session player ရွေးတီးတာလား၊ တီးဝိုင်းအလိုက် အပ်ပြီး တီးခိုင်းတာလား?
ဖြေ ။ တီးဝိုင်းအလိုက်လည်း ပါသလို session players တွေလည်း ပါပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သီချင်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ပုံဖော်နိုင်ဖို့ အတွက်ပဲ ဦးတည် စဉ်းစားခဲ့တာပါ။
မေး ။ “ကျောက်သားခြေရာ” ခွေထဲမှာ ပရိသတ်ကို မဖြစ်မနေ နားထောင်ကြည့်ဖို့ သီချင်း ၂ ပုဒ်လောက် ပေးပါဆိုရင် ဘယ်သီချင်းတွေကို ရွေးပေးမလဲ?
ဖြေ ။ ၂ ပုဒ်တည်းဆိုရင်တော့ ရွေးရတာ ခေါင်းစားပြီ။ အပုဒ်တိုင်း အပုဒ်တိုင်းမှာ ကျနော်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဆီရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရမက ရွေးပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ “တိုက်ပွဲ” နဲ့ “နေပါဦး” ဆိုတဲ့ ၂ ပုဒ်ကို ရွေးချင်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ တည့်တည့်ကြီး ပတ်သက်နေလို့ပါ။
မေး ။ “ကျောက်သားခြေရာ” အတွက် ရော့ပရိသတ်တွေကို ဘာတွေ ပြောချင်ပါသေးလဲ?
ဖြေ ။ ဘာပြောချင်သလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဘာတွေလုပ်ထားသလဲ ဆိုတာ တခေါက်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့။ အဲတော့မှ ချိုသလား ခါးသလားဆိုတဲ့ အရသာ တခုခုကို သိနိုင်မှာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခံစားမှု တခုခု ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့တော့ ယုံတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျနော်တို့တွေ မီးကုန် ယမ်းကုန် ကြိုးစားထားပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။